Jam the Yogurt: Food Innovation Series (Prelude) – Impact Hub Yangon
« Myanmar Digital Innovation & Development Event Series 2
Apps & Beers Episode.6 »
Jam the Yogurt isafood innovation event series that will inspire food startups and food innovators by providingaplatform to meet, share opportunities and co-create innovative food solutions to improve current supply and value chains in Myanmar.
At the event, you must be ready to taste or test new value-added food products or experience new food innovations from various food startups, listen to their history of food originality and how they pivot the traditional way of making food into new, innovative and healthy way.
There will be product samplings and networking along with the presentations and short fireside chat by food experts!
We will cover the following topics throughout the series,
Let’s Jam the Yogurt!
Date & Time: 31st August 2019 | 1 pm –4pm
Place: Impact Hub Yangon Yaw Min Gyi
Jam the Yogurtဆိုသည်မှာ အစားအသောက်စွန့်ဦးတီထွင်သူများနှင့် စတင်တည်ထောင်သူများ အချင်းချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းများအားဝေမျှပေးခြင်း၊ တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော အစားအသောက်အသစ်များကို ပူးပေါင်းဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏လတ်တလော ဈေးကွက်ထဲရှိ အစားအသောက်တန်ဖိုးနှင့်ထောက်ပံ့မှုများကို တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်သော အစားအသောက်ဆန်းသစ်တီထွင်သည့် လွှတ်လပ်ပေါ့ပါးသောပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အခမ်းအနားတက်ရောက်လာကြသူများသည် ဖန်တီးသူများမှ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားသော အစားအစာများကို စမ်းသပ်မြည်းစမ်းနိုင်မည့်အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်ပါသည်။အခမ်းအနားတွင် ၄င်းတို့၏ထုတ်ကုန်စတင်ဖန်တီးခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းများအားပြောကြားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်စားသုံးနေသော သမာရိုးကျအစားအစာအား ပိုမိုဆန်းသစ်ပြီးလတ်ဆတ်အောင် မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုပြောကြားမည်ဖြစ်သည်။
တင်ပြမှုအပြီးတွင် အစားအသောက်နမူနာများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အစားအစာတီထွင်သူ နယ်ပယ်တူအချင်းချင်းတွေ့ဆုံစကားပြောခြင်းတို့အားပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးမည်ဖြစ်သည်။
Jam the Yogurt